» २० किलो तौउल घटाए पछि यस्तो देखिन रेखा थापा फोटो सहित…. २० किलो तौउल घटाए पछि यस्तो देखिन रेखा थापा फोटो सहित…. – हाम्रो खबर
२० किलो तौउल घटाए पछि यस्तो देखिन रेखा थापा फोटो सहित….
नेपाली सिने जगतकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा यति बेला फेरि चर्चामा आएकी छिन। यो समय फिल्मको चर्चा नभैइ उनको तौल घटाएर चर्चा मा छिन । स्पष्ट विचार कुशल अभिनयको कारण लाखौ नेपाली मन मुटुमा बस्न सफल रेखा समाजिक सन्जाल फेसबुक मा ३० लाख बढीले उन्लाई पच्छ्याई रहेका छन । कहिले सामाजिक कामको कारण चर्चामा आउछिन त कहिले फ्लिमको कारण नेपाली सिनेमामा महिलालाई सहायक भुमिकामा मात्र सिमित गर्ने सिनेकर्मी हरु रेखा थापालाई मुख्य भुमिका मा लिने गर्दछन । उनि सामाजिक संजालमा भने धेरै जसाे सक्रिय रहन्छिन् । यतिबेला उनकाे शरिरकाे फिट्नेशकाे चर्चा भइरहेकाे छ।कह
तर मोटोपन भएका मानिसहरुलाई शरिरको तौल घटाउन निकै समय लाग्छ । कतिपय त ताैल घटाउने क्रममा अझ ताैल बढ्ने गर्छ । मानिसहरु शरिरलाई स्लिम राख्न बिहान मर्निङ वाक गर्ने र जिम धाउने गर्छन् ।
यस्तै, अभिनेता लगायत अभिनेत्रीहरु पनि शरिरलाई स्लिम बनाउन मिहेनत गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी निकै चर्चा कमाएकि तथा चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले पनि केही महिनादेखी आफ्नो मोटो शरिर स्लिम बनाउनमा लागेकी छिन् । #
उनले खानपिन र व्यायममा ध्यान नदिदा शरिरमोटो हुँदै गयो । तर अहिले उनले आफ्नो मोटो शरिर घटाएकी छिन् । नायिका रेखा थापाले लकडाउन भित्र ४ महिनामै आफ्नो २० किलोे तौल घटाएकी छिन् ।
कोरोना संक्रमणको बेलामा जिम जान जोखिम हुने हुनाले उनले घरमै दैनिक व्यायम गर्ने गरेकाे उनी बताउछिन् । ट्रेनर विज्जु पार्कीसँग अभ्यास गरेका तस्बिरहरु पनि केही समयदेखी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ ।
कहिले सामाजिक कामको कारण चर्चामा आउछिन त कहिले फ्लिमको कारण नेपाली सिनेमामा महिलालाई सहायक भुमिकामा मात्र सिमित गर्ने सिनेकर्मी हरु रेखा थापालाई मुख्य भुमिकामा लिने गर्दछन । रेखा थापा सिने जगत मा आईसकेपछी हिरोले गर्न सक्ने काम हिरोनिले गर्न सक्छन भन्ने संदेश दिएकी छिन ।रेखा निर्मित चलचित्र प्राय महिला शसक्तिकरण र महिलाहरुको समस्या गुनासो को उठान गर्दै आएकि छिन । सामाजिक सञ्जालमा अभ्यास गरेका तस्बिरहरु शेयर गरिरहेकी छिन् । उक्त तस्विर हामिले हजुरमाझ उपस्तित गरेका छाैँ ।